Erdogan oo sheegay inay heleen kayd gaaska dabiiciga ah - Tilmaan Media
Erdogan oo sheegay inay heleen kayd gaaska dabiiciga ah
Turkiga ayaa kahelay Badda Madaw kayd aad ufara badan oo gaaska dabiiciga ah sida uu sheegay madaxwaynaha dalkaas Rajab Dayyib Erdogan.
Hadal aad loo sugyay oo ayuu Erdogan ku sheegay in baaritaan ay maraakiibtoodu wadaan mudooyinkii lasoo dhaafay ay ku heleen kayd gaas oo gaaraya 320 billion cubic meters. ” gaaska lahelay waa qayb yar oo kamid kayd ballaaran, waxaana sii wadi doonaa helida kaydad kale mustaqabalka dhaw” ayuu yiri Erdogan.
Erdogan ayaa Arabcadii lasoo dhaafay sheegay in uu dadka Turkida u hayo war farxad leh uuna baahin doono maalinka Jimcada saacadu marakay tahay 3 p.m. Waxaana malaayiin turki ah u dhag taagayeen bal warka madaxwaynuhu soo wado.
Madaxwaynaha Turkiga ayaa sheegay in wakhtiyadii hore ay shirkado shisheeye ah u dirsan jireen shaqooyin sahminta shidaalka, laakiin wixii kadambeeyay 2017 laqarameeyay shirkadaha shidaal sahminta. Wuxuu sheegay in shirkadaha banaanka laga leeyahay ay ku fashilmeen inay helaan kayadkaan dhawaan lahelay.
Sida uu sheegay Fatih Dönmez oo ah wasiirka tamarta ee Turkiga, marka la,eego sicirka gaaska ee 3-5 sano ee u dambaysay kaydka gaaska ah ee laga helay Badda Madaw ayaa qiime ahaan udhigma illaa $65 bilyan.
Dönmez ayaa sheegay in xittaa haddii ay waayaan kayd kale oo gaas ah in kaydka hadda lahelay uu kufilan yahay daboolidda baahida dalka 7-8 sano.
Gaaskaan ayaa hadii lasoo saaro waxay hoos udhigaysaa kutiirsanaanta Turkiga gaaska lasoo dhoofiyo. Turkiga ayaa %90 dibadda kasoo dhoofsada gaaska dalka laga istimcmaalo.
Puntland iyo Jubaland oo ku gancansayray heshiiskii Dhuusamareeeb 3
Xisbiga Wadajir oo kahadlay heshiiskii Dhuusamaareeb 3